China Intelligent Key management system A-180E Miaraka amin'ny orinasa USB Connector sy mpamatsy | Landwell
Rafitra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina
Rafitra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina A-180E Miaraka amin'ny Connector USB
A-180E manome fandaminana tonga lafatra 18 fanalahidy sy zava-tsarobidy kely ho an'ny orinasanao. Ireo mpampiasa nahazo alalana ihany no afaka mahazo ny lakile miaraka amin'ny fikirana fahefana. Ankoatr'izay, ireo mpampiasa nahazo alalana dia mampahafantatra ny tenany (ao anatin'ny fe-potoana voafaritra iray) amin'ny alàlan'ny karatry ny mpampiasa, ny teny miafinao ary ny dian-tanan-tanana eo amin'ny terminal. Ny antsipiriany rehetra toy ny fandraisana sy ny fiverenana ny lakile dia hojerena amin'ny tatitra isan-karazany.
Anaran'ny vokatra: Rafitra fitantanana lehibe
Product Module: A-180E
Size: 500mm × 400mm × 180mm
Rafitra rafitra: Android
UNITÉ CENTRALE: 4-core ARM CortexTM-A7, miverina amin'ny 1.2GHz
Screen: Efijery fijery feno 7 "
Fahatsiarovana: RAM 1GB mahazatra + ROM 8GB
Temperature miasa: 2-40 ℃
* 18 iFobs azo ovaina, matanjaka sy maharitra, miaraka amin'ny peratra fanalahidy azo antoka sy marika RFID
* Tsy mila tombo-kase fanampiny eo anelanelan'ny fanalahidy sy fob
* Ireo mpampiasa manana fidirana amin'ny lakile sasany, mitantana ny manampahefana lehibe toy ny fisoratana anarana ny mpampiasa ary manome ny fidirana
* Hazo fisehoan-javatra
* Fanamarihana ny tsy fisian'ny fanalahidy maharitra
* Fampiasana amin'ny fiteny maro
* Touchscreen sy rafitra Android manangona ny fanaraha-maso, ny fanarahana ary ny tatitra ny fanalahidy na ny kitendry izay ahondrana ireo tatitra amin'ny alàlan'ny mpampitohy USB
* Fanairana eo noho eo ho an'ny fandraisana na fiverenana fanalahidy tara loatra, miaraka amin'ny jiro mena fampitandremana mena ao anaty lohan-dahatsoratra sy feo azo antoka;
* Famotsorana ny lakilen'ny vonjy taitra
* Famantarana varavarana misokatra
* Kitendry fanaraha-maso mikasika 7 ”
LANDWELL Intelligent Key Management System dia manome fandaminana tonga lafatra amin'ny fanalahidy marobe sy zava-tsarobidy kely ho an'ny orinasanao.
Ireo mpampiasa nahazo alalana ihany no afaka mahazo ny lakile miaraka amin'ny fikirana fahefana. Inona koa, ireo mpampiasa nahazo alalana dia mampahafantatra ny tenany (ao anatin'ny fe-potoana voafaritra iray) amin'ny alàlan'ny karatry ny mpampiasa, ny teny miafinao ary ny dian-tanan-tànana ao amin'nyLANDWEL Terminus. Ny antsipiriany rehetra toy ny fandraisana sy ny fiverenana ny lakile dia hojerena amin'ny tatitra isan-karazany.
Fanamarihana mari-pahaizana momba ny rantsan-tanana tsy manam-paharoa
RFID mandroso fanta-daza fanta-daza, mahatonga azy ho mandeha ho azy tanteraka
Mora ny miasa
Varavarana PMMA na varavarana vy tsy misy atahorana mba hilamina kokoa ny fanalahidy
Ampiasao CPU sy Flash tsy miankina maro node, mahatonga ny fanalahidy miverina & miverina mora kokoa
Fikarohana fanalahidy mandeha ho azy tsy manam-paharoa
Voafehy ny lakile amin'ny alàlan'ny fitaovana sy rindrambaiko
Tafiditra amin'ny ankamaroan'ny rafitra fanaraha-maso ny fidirana
Hadino ny lakile
Adinoy aiza ny lakile sisa?
Ny mpiandry lakile ve sa adidy sa tsia?
Misavoritaka amin'ireo lakilen'ny mpampiasa?
Raiso tsy ara-dalàna ny lakile rehefa miala amin'ny asa ianao.
Mbola mampiasa fomba fitantanana nentim-paharazana ihany ve ianao amin'ny alàlan'ny sonia ny fandraisana na famerenana lakile mandritra ny asanao?
Ataovy azo antoka ho azo ampiasaina ny lakilanao sy ny fanananao
☆ Arovy ny lakilanao sy ny fanananao
Ny rafitra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina anay dia afaka miantoka ny fiarovana ny fananan'ny mpampiasa, izay tsy azo ampiasaina raha tsy mahazo alalana.
☆ Fanaraha-maso fidirana
Afaka manapa-kevitra hoe iza no afaka mampiasa ny fananana amin'ny fotoana iray.
Ny asa rehetra dia voarakitra an-tsoratra ary mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny fananana ny mpampiasa.
☆ Mampihena ny fotoana simba
Tehirizo amin'ny toerana ilanao azy ireo ny lakile, ary raiso amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza
☆ Fanangonana tahirin-kevitra manan-danja
Ny fampahalalana momba ny fampiasana dia voarakitra ho an'ny mpampiasa sy ny fananana tsirairay, ary miteraka tatitra ho an'ny fananana sarobidy.
☆ Fanafainganana ny fampandrosoana
Izy io dia afaka mampihena ny vidin'ny fitantanana ary manome fifehezana tsara ho an'ireo dingana lehibe.
Previous: H2000 Network Electronic fanalahidy fanaraha-maso kabinetra
Manaraka: i-keybox-8 boaty kely misy rafitra fitantanana sy lakile
Rakitra fitehirizam-bokin'ny kabinetra
Kabinetra fitehirizana vy
i-keybox-64 Kabinetra Lock Lock azo antoka indrindra
H2000 Network Electronic fanalahidy fanaraha-maso kabinetra
Landwell manan-danja boaty fanalahidy ambony fiarovana ...
bokotra kabinetra elektrika i-keybox-16 manerantany
rafitra fivarotana fanalahidy lehibe an'ny mpivarotra birao
Kabinetra fitehirizana lehibe, Kabinetra lakile azo mihidy, Ny boaty ho an'ny fanalahidy fanaraha-maso, Vata fanalahidy mihantona, Rafitra fitantanana boaty kely sy lakile, Kabinetra fitantanana lehibe,